Ewebata WatchOS 4: ịmatakwu na nkwalite na onye ọzụzụ onwe onye | Esi m mac
E webatara WatchOS 4: ịmatakwu na nkwalite na onye ọzụzụ onwe gị
Tim Cook ekpebiela ịmalite site na igosipụta ozi ọma anyị ga-ahụ na sistemụ Apple Watch na-esote, Apple WatchOS 4 . Ndị ọrụ mere mkpesa nke obere ojiji ma ọ bụ mmekọrịta na nche, ga-abụ chi. Site ugbu a gawa, nche ga-enye anyị ọtụtụ ozi ndị ọzọ n'ụbọchị nke smart ificationsma Ọkwa, dị ka oge ọ ga-ewe iji laa n'ụlọ, oge ọ bụ mgbe anyị ga-apụ n'ụlọ. Na mgbakwunye, anyị nwere ọtụtụ nke Ihe ngosi di iche nke na-eme ka nche anyi di ohuru, na-enye ya ọdịdị dị ugbu a karị. Dị ka ihe atụ, onyinyo zuru oke nke ngosi nke oge ahụ, ma ọ bụ nnabata nke ndị ọhụụ iji gwa anyị oge: anyị nwere ihe egwuregwu Toy Story dịka Buddy ma ọ bụ Buzz Lightyear.
Ma akụkụ nke na-ewe ọtụtụ mmepe ruo ugbu a bụ itinye ya n'ọrụ onye na-enye ọzụzụ onwe gị. Ọhụrụ ọhụụ nke na-enye anyị ohere ịhọrọ egwuregwu a ga-arụ, yana ozi zuru ezu banyere anya, nyocha mkpụrụ obi, na ndị ọzọ. Ọ dịghị ihe ị ga-enwe anyaụfụ na nche egwuregwu.
Ihe ngosi ahụ kwụsịrị site na ngosipụta nke akụkụ egwuregwu, nke na-arụ ọrụ zuru oke.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » E webatara WatchOS 4: ịmatakwu na nkwalite na onye ọzụzụ onwe gị
Mmelite na Safari, ihe nchọgharị kachasị na nchekwa
A ga-akpọ sistemụ ọhụrụ Mac macOS High Sierra